QM iyo Midowga Afrika oo ka hadlay Xiisada U Dhaxeysa Jabuuti iyo Eritrea – SBC
QM iyo Midowga Afrika oo ka hadlay Xiisada U Dhaxeysa Jabuuti iyo Eritrea
Posted by SBC Editor on June 17, 2017 Comments
Wasiirka Arrimaha Dibada Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in ciidanka la geliyey heegan ayna cabasho u gudbiyeen Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika.
14kii Jun ayey Qadar kala baxday ciidankeedii nabad ilaalinta soohdinta ay ku muransanyihiin labadaas dal, maalin kadib markii ay la safteen xulufada Sucuudiga ee go’doominta ku haya.
Wasiir Ali Yuusuf wuxuu sheegay in Qadar la baxday ciidankeedii 12kii iyo 13kii Jun, isla maalintaasna ay u soo dhaqaaqeen ciidanka Eritrea buurihii la isku hayey.
“Hada waxay si buuxda gacanta ugu hayaan buurta Dumeira iyo Jasiirada Dumeira. Tani waxay xadgudub ku tahay qaraarkii Golaha Amaanka” Ayuu yiri Wasiir Yusuuf.
June 2008 ayey gacanta isula tageen markaas oo Jabuuti ku eedeysay Asmara inay ciidankeeda u soo dhaqaajisay xuduuda, waxaa laga cabsi qabaa inuu markale dagaal dhexmaro.